ကလေးငယ်ကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆပ်ပြာမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ဖို့လိုတာလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ » ကလေးငယ်ကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆပ်ပြာမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ဖို့လိုတာလဲ
ယနေ့ခေတ်မှာ ကလေးငယ်တွေကိုပါမကျန် အသားအရေထိန်းသိမ်းပေးနေကြပြီဖြစ်သလို ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ကလေးအသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့် ဖေဖေမေမေအသစ်စက်စက်လေးတွေအတွက် ရွေးရခက်လွန်းပါတယ်။ ကလေးငယ်ကိုရေချိုးပေးဖို့အတွက်ရွေးခယ်တဲ့အခါမှာလည်း မှားယွင်းရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်မှာ အရေပြားပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကလးငယ်လေးတွေရဲ့ အရေပြားက နူးညံ့ပြီး တုံ့ပြန်လွယ်လွန်းတာကြောင့် ပုံမှန်သုံးနေကျဆပ်ပြာတွေက ကလေးတွေရဲ့အရေပြာအတွက် အရမ်းပြင်းနေမှာဖြစ်သလို အရေပြားမှာ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အဖြေကတော့ ကလေးငယ်တွေအတွက်သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ Cleansers တွေကို အသုံးပြုပေးတာပါပဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အသားအရေက လူကြီးတွေလောက်မညစ်ပတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုရေချိုးသန့်စင်ပေးတဲ့အခါ ဆပ်ပြာသုံးဖို့မလိုပါဘူး။ ကလးဆရာဝန်တွေကတော့ ကလေးတွေကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ဆပ်ပြာမသုံးကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကလေးအရေပြားကို ဆပ်ပြာနဲ့ပွတ်တိုက်တာက အရေပြားပေါ်က သဘာဝအဆီတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်သလိုဖြစ်သွားစေနိုင်ပြီး အသားအရေကိခြောက်သွေ့စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးငယ်တွေမှာ နှင်းခူ (eczema) ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အမေတွေက ကလေးငယ်ကိုဆပ်ပြာမပါဘဲ ဘယ်လိုသန့်စင်ပေးမလဲဆိုတဲ့အချက်ကမေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ ရေစေးကိုသာသုံးရတဲ့မိသားစုတွေအတွက် ဒီမေးခွန်းကတော်တေ်ာလေးအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကလေးငယ်က ရွှံ့တွေဗွက်တွေပေကျံနေမယ်၊ ဆီတွေပေကျံနေမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုများသန့်ရှင်းပေးရမလဲ။ ဒီလိုအနေအထားမျိးမှာ အကောင်းဆုံးသောအဖြေက ဆပ်ပြာမပါဝင်တဲ့ ကလေးတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ အရည်ပုံစံ cleanser ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာသတိထားရမှာက ကလေးအတွက် အသုံးပြုပေးတဲ့ cleanser ကအရေပြားခြောက်သွေ့တာမျိုးမဖြစ်စေမယ့်အရာမျိုးဖြစ်ဖို့ပါ။
ကလေးအတွက် cleanser ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဘာတွေသတိထားရမလဲ
သဘာဝပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတာတွေကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ ကလေးငယ်ရဲ့အရေပြားပေါ်က သဘာဝအတားအဆီးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတဲ့ cleanser တွေက ကလေးအရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာအချို့က အနံ့အရမ်းပြင်းလွန်းတာကြောင့် ကလေးအသားအရေကို ထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်အတွက် cleanser ရွေးချယ်တဲ့အခါ နူးညံ့ပြီး အနံ့မပြင်းတာမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါမယ်။
ကလေးအတွက် cleanser ရွေးချယ်တဲ့အခါ နူးညံ့ပြီးစိတ်ချရတာမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါမယ်။ cleanser ကိုမသုံးခင်မှာ အနည်းငယ်ယူပြီး ကလေးရဲ့ လက်မောင်းမှာအသုံးပြုကြည့်ပါ။ အရေပြားတုံ့ပြန်မှုအနေအထားကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
Johnson ရဲ့ Top To Toe Wash ကလည်း ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာရရှိထားတဲ့ ကလေးအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဒီပစ္စည်းလေးက ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ နူးညံ့တဲ့အသားအရေနဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ မျက်လုံးတွေအတွက်ပါ သင့်တော်ပါတယ်။ NO MORE TEARS က ရေချိုးနေချိန်မှာ ကလေးမျက်လုံးထဲကိုဝင်သွားရင်တောင်မှ ကျိန်းစပ်တာမျိုးရှိစေမှာမဟုတ်ဘဲ ကလေးအသားအရေကိုပါ ချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးက ကလေးငယ်အရေပြားကိုခြောက်သွေ့စေတာမျိုးမရှိဘဲ တုံ့ပြန်လွယ်တဲ့ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်ရဲ့အသားအရေကို သန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ထောက်ခံချက်ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ပထမဆုံးလိုက်နာရမယ့်အချက်က ကလေးကို ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေချိုးနေစဉ်တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ တစ်မိနစ်လောက်တောင်မထားခဲ့ပါနဲ့။ ကလေးက ငယ်လွန်းတာကြောင့်ရေတစ်လက်မလောက်မှာတောင် ရေနစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်ကိုရေမချိုးပေးခင်ကတည်းက လိုအပ်မယ့်အရာတွေဖြစ်တဲ့ တဘက်၊ခေါင်းလျှော်ရည်၊အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်တွေကို တစ်ခါတည်းယူထားပါ။ လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကို အသင့်ယူထားရပါမယ်။ ကလေးကိုရေချိုးပေးနေချိန်မှာ လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ထိန်းထားဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှာ ကလေးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ အမြဲထိန်းပေးထားရပါမယ်။ ရေချိုးပေးနေချိန်မှာ တံခါးဘဲလ်မြည်တာ၊ဖုန်းမြည်လာတာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြေဖို့လိုပါမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကလေးကိုရေချိုးပေးနေတာကိုရပ်ပြီး တဘက်နဲ့ထွေးပြီး တစ်ပါတည်းခေါ်သွားပေးပါ။
ကလေးက လူကြီးတွေနဲ့ ကိုယ်အပူချိန်မတူတကို မေ့မထားပါနဲ့။ ဒါကြောင့် ကလေးကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ရေအရမ်းပူတာ၊ အရမ်းအေးတာမျိုးတွေကို မသုံးပါနဲ့။ အပူချိန် ၂၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်က ကလေးငယ်တွေအတွက် သက်တေင့်သက်သာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကလေးက အလွယ်တကူအအေးမိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အမြဲသတိထားပေးပါ။ ဒါကြောင့်ရေချိုးပေးတဲ့အခါ မြန်မြန်လေးချိုးပေးပါ။ ရေဖွင့်ထားတုန်း ကလေးကို ရေချိုးဇလုံထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ရေအပူချိန်ကို လက်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်တို့နဲ့ထိပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ရေကကလေးငယ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အပူချိန်ရှိနေတာသေချာစေဖို့ပါ။ ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်စ သားသားမီးမီးလေးတွေက ရေအေးအေးတွေကို ပိုကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။
မွေးကင်းစနဲ့လသားကလေးတွေအတွက်ကတော့ ရေကိုအများဆုံး ၂ လက်မ ကနေ ၄လက်မလောက်ပဲထည့်ပါ။ ရေချိုးတဲ့ဂျယ်လ်က ချော်လဲတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကလေးကိုရေချိုးနေတုန်း မတ်တတ်ထရပ်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ သင်ပေးထားပါ။
ဆပ်ပြာရည်တွေက ကလေးငယ်ရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းကို ကျိန်းစပ်စပ်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကလေးငယ်ကို ဆပ်ပြာရည်ထဲမှာစိမ်ပြီးရေချိုးပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကလေးငယ်မှာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေများနိုင်တာကြောင့်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကလေးကိုရေချိုးပေးတဲ့အနီးအနားမှာ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ ဆံပင်လိပ်စက်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်တွေလိုမျိုး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုမထားမိဖို့ သတိထားရပါမယ်။
Is It Safe To Use Baby Soap For Bathing My Baby? https://www.beingtheparent.com/is-it-safe-to-use-baby-soap-for-bathing-my-baby/ Accessed November 30, 2017
Tips for safe bathing. http://www.babycenter.com/0_tips-for-safe-bathing_40.bc Accessed November 30, 2017
Baby bath basics: A parent’s guide. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/healthy-baby/art-20044438 Accessed November 30, 2017
How to Bathe Your Baby. http://www.johnsonsbaby.com/bath/how-to-bathe-a-baby Accessed November 30, 2017